दलान नेपाल : December 2015
३ पुषमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुसार आज मधेशका सवै जिल्लाहरुमा लाठी जुलुस निकालिएको छ । मोर्चाको आब्हानमा निकालिएको सवै जिल्लाहरुको लाठी जुलुसमा विशाल जनसहभागीता रहेका थिए । मुख्य गरी विरगंज, कलैया, गौर, मलंगवा, जनकपुर, राजविराज, विराटनगर लगायतका सहरहरुमा निकालिएको लाठीजुलुसमा आम मधेशीहरुको उलेख्य सहभागीता रहेको देखिएका छन । गएको शनिवार विराठनगर जोगवनी नामामा धर्ना बस्न गएको वेला मोर्चाका एक जना शिर्ष नेता सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो माथी प्रहरीले आक्रमण गरेपछि मधेशमा थप आक्रोश पैदा हुदै गएको देखिन्छ । महतो माथी भएको प्रहरी आक्रमणको विरुद्धमा मधेशका विभिन्न सहरहरुमा उग्र प्रर्दशनहरु समेत गरिएको छ । आजको लाठी जुलुसको क्रममा समेत कतिपय ठाउहरुमा उग्र प्रर्दशनहरु भएको देखिन्छ । पछिल्लो चरणमा मोर्चाले आज सम्म १५ पुष सम्मको केन्द्रिय तहको कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका थिए । अवको दुई तीन दिन संघिय गठवन्धनको कार्यक्रमहरु रहेका कारण मोर्चाले १९ पुषमा अव मात्रै आफनो अगामी रणनीती सहितको थप केन्द्रिय स्तरको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने छन । स्थानिय स्तरमा मोर्चाले छुटै विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरु समेत गर्दै आएका छन ।
मोर्चा अगामी रणनिती बनाउदै
किन असफल हुदै छन वार्ता प्रक्रिया ?
गएको साढे चार महिना देखि आन्दोलनरत मधेशी पक्ष र प्रमुख दलहरु विच वार्ता हुदै छ भन्ने समाचार आउने वितिकै सवैको चासो त्यता जाने गर्छन । स्वभाविक पनि हो । लामो समय देखि जारी आन्दोलनले मधेश देखि पहाड सम्मको जनजीवनहरु प्रभावित छन । त्यही भएर होला वार्ताको समाचारले आम नागरिकलाई अली वढी आशावादी वनाइ दिन्छ । र हरेक वार्तावाट नेताहरु निस्कदा भन्ने गर्छन, कुराकानी साकारात्मक रुपमा अगाडी वढेको छ, केहि दिनमै टुगो लाग्छ । यसले थप हौसिन्छ नागरिकहरु । तर त्यस्तो परिणाम देखिनमा आउदैन । फेरी दलहरु पुरानै विन्दूमा गएको देखिन्छ । आखिर किन यस्तो भईरहेको छ । पछिल्लो समयमा सरकारी पक्ष भन्दा पनि काग्रेस र एमाओवादी संग वढी बसउठ गरीरहेका मोर्चाका नेताहरु भन्छन, याहा वाट पनि केहि निस्कीएला भन्नेमा विश्वास छैन । तर गएको शनिवार वार पछिल्लो पटक काग्रेस एमाओवादीसंग छलफलमा बसेका एक नेता भन्छन, किन त्यस्तो नहोस । चार घण्टाको छलफलमा कुनै निष्कर्ष निस्केकै हुदैन, अनि आउने वेलामा प्रमुख दलका नेताहरुले वाहिर साकारात्म्क छ भनेर प्रेसमा भन्नुस भनेर उर्दी जारी गर्छन, हामी त्यही अनुरुप भनिदिन्छौ तर केहि भएकै हुदैन अनि परिणाम कसरी देखियोस । पछिल्लो शनिवारको छलफलको सन्दर्भमा त्यहा सहभागी एक नेता भन्छन, तीन घण्टाको काग्रेस संग छलफलमा मोर्चाको ११ बुदे वारेमा समान्य छलफल र काग्रेसले संसदमा पेश गरेको संशोधन विद्येयक वारेमा अली वढी छलफल भयो । हामीले उक्त परिमार्जन विना परित भयो भन्ने हामी स्विकार गर्ने छैन भनेर कुरा राख्यौ उहाहरुले समान्य परिवर्तनको जनाउ दिनु भयो जसले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्ने कुरै आउदैन, ती नेता भन्छन, अनि अन्तमा प्रचण्डजी आउदा पनि यही सेरोफेरोमा कुरा भयो साझ अली वढी घर्कन थालेको थियो, हामी सवै जना निस्कने कुरा गर्यौ । निस्कने कुरा आए पछि प्रचण्डले भने, एउटा सानो टिम बनाएर सवै कुराको वारेमा एउटा आधार वनाउ र त्यसलाई सहमतीको स्वरुप दिने कुरा गरेको मोर्चाको नेताको भनाई छ । तर मोर्चा भन्दा पहिला त्यसमा काग्रेसले प्रश्न गर्यो, के एमालेले मान्छन त्यो । त्यसपछि काग्रेसका केहि नेताले प्रचण्डलाई उक्त जिम्मा दिए, तपाइ एमाले संग कुरा गर्नुस अनि भोली वसौला । त्यसपछि प्रचण्डले मोर्चाका नेताहरुलाई तपाईहरु वाहिर साकारात्म्क छलफल हुदै छ भनेर बोलि दिन आग्रह गरे । उनले हामी भोली एमाले सहित बैठक गर्ने पनि जिम्मा लिए । तर त्यसो हुन सकेन । वार्ता तथा छलफलहरुमा सहभागी हुने नेताहरु भन्छन, सुरुमा सवै विषय माथी कुरा हुन्छन तर अन्तिममा निष्कर्ष निकाल्ने वेलामा हामी एउटा पनि ठोस रुपमा दिन सक्दैनौ, अहिले सम्मको वार्ता र छलफलको निचोड यस्तै छ । अनि कसरी होस वार्ता प्रकिया सफल ? उनले प्रश्न गरे ।
किन अफल हुदै छन वार्ता ?
'राष्टवादले समावेशीताको ग्यारेन्टी गर्नै पर्छ ।'
नेपाली काग्रेसका नेता प्रदीप गिरी तथा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राष्टवादले समावेशीतको ग्यारेन्टी गर्नु अनिवार्य रहेको तर्क गरेका छन । काठमाडौमा पत्रकार प्रशान्त झा द्धारा लेखिएको व्याटल अफ रिपब्लीकाको नेपाली संस्करण गणतन्त्रका संघर्षहरुको विमोचन कार्यक्रममा आयोजना गरिएको कार्यक्रम यी दुइ नेताले समावेशीताको ग्यारेन्टी विना राष्टवाद हुनै नसक्ने दावी गरे । डेढ बर्ष अघि प्रकाशित व्याटल अफ रिपब्लीकाको नेपाली संस्करण गणतन्त्रका संघर्षको अनुवाद उज्जवल प्रसाइले गरेका छन । विमोचोन समारोहमा आयोजना गरिएको कस्तो राष्टवाद र कसको राष्टवाद शिर्षकको छलफलमा मधेश आन्दोलनका एक जना अगुवा नेता महन्थ ठाकुर र नेपाली काग्रसका नेता प्रदीप गिरी उक्त शिर्षक माथी विचारहरु राखेका थिए । जारी मधेश आन्दोलनलाई तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेशीहरुको राष्टीयतासंग जोडदै यसको उचित सम्बोधन भए नेपालको राष्टियता मजवुत हुने दावी गरे । मधेश आफैमा छुटै राष्ट हो, म नेपाली काग्रेसमा रहदा देखि नै यो कुरा भन्दै आएको छू, ठाकुरले भने यसवाट आतिनु पर्ने वा डराउनु पर्ने कारण छैन । एउटा देश भित्र विभिन्न राष्टीयताहरु हुन्छ ठाकुरले भने त्यस सवैलाई मिलाएर देश अगाडी वढदा झनै मजवुत हुन्छ ।
विराटनगरको नाकामा तनाव । सदभावना अध्यक्ष महतो सहित कयौन नेताहरु धाइते ।
प्रहरीसंगको झडपम धाइते भएका सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो अस्पतालमा
विराटनगर स्थित जोगवनी नाकामा धर्ना दिन पुगेका सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो प्रहरी संगको दाहोरो झडपमा धाइते भएका छन । महतो आज दिउसो देखि उक्त नाकामा धर्ना दिने पुर्व कार्यक्रम थियो । विरगंज नाकामा बस्दै भएका महतो हिजो अवेर साझ भारतीय वाटो हुदै विराटनगर पुगेका थिए । आज दिउसो विराटनगर जोगवनी नाकामा धर्नामा बसीरहेको वेला प्रहरीले हस्तपेक्ष गरेर महतोलाई नियन्त्रणमा लिन खाजेका थिए । त्यस पछि स्थिती तनावपुर्ण बन्न पुगेको र दाहोरो झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो । दाहोरो झडपको क्रममा महतो संगै सदभावना पार्टीका प्रवक्ता संतोष मेहता सहित आधा दर्जन नेताहरु धाइते भएका छन । महतोको टाउको र खुटामा चोट लागेको सदभावनाका प्रवक्ता संतोष मेहताले बताए । धाइते महतो सहित अन्य सवैको विराटनगरमा उपचार गरिएको छ ।
आन्दोलनरत मोर्चाको तयारी - 'एक धक्का अझै जोडले दिनु पर्छ ।'
at 6:15 AM Posted by Dalan
गएको चार महिना देखि आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले एक धक्का अझै जोडले दिनु पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको तयारी गरिरहेका छन । गएको ३ पुषमा आन्दोलनलाई फेरी सश्क्क्त बनाउने निर्णय सार्वजनिक गरे लगतै मधेशमा छठ पछि सुस्ताएको आन्दोलन विस्तारै उग्र वन्दै गईरहेको देखिन्छ । यही विच सरकारी पक्षले मन्त्रीपरिषद वाट वार्ताका लागी तीन बुदे निर्णय सहित आब्हान गरेको थियो । तर मोर्चाले त्यसलाई अपुरो भन्दै अस्विकार गरेका थिए । औनपचारिक छलफलमा सहभागी मोर्चाका नेताहरुका अनुसार सुरुमा आन्दोलनलाई नै मान्न तयार नहने प्रमुख दलहरु अहिले संघियता वाहेकको सवै मुद्धा सम्बोधन गर्न तयार भएको छ, आन्दोलनलाई अझै एक चरण जोडले धक्का दिएमा संघियता प्रति समेत उनीहरु वाध्य भएर सम्बोधन गर्न तयार हुने आकंलन गरेका छन । अनौपचारिक छलफलहरुमा सहभागी नेताहरुका अनुसार प्रमुख दलहरु संघियताको सन्दर्भमा अझै पनि लचिलो भएको अवस्था छैन, यस्तो अवस्थामा अन्य मुद्धा सम्बोधन गरेर मात्रै सहमती गर्दा संघियता फेरी जस्ताको त्यस्तै रहने सम्भावना हुन जान्छ । त्यसैले आन्दोलनलाई फेरी एक चोटी उचाईमा पुर्याउदै प्रमुख दलहरुलाइृ झुकाउनु पर्छ ।
कसरी अतिरञ्जित बन्यो राष्टपतिको जनकपुर भ्रमण ?
पुष १ मा विवाहपन्चमीको अवसरमा राष्टपति विद्यादेवी भण्डारी जनकपुर पुगीन । त्यसको चार दिन पछि काठमाडौमा उनी विरुद्ध भएको प्रर्दशन वारेमा विभिन्न प्रकारका समाचारहरु आए । गएको चार महिना देखि आन्दोलनमा रहेको मधेशका शक्तिहरुले उनको भ्रमणको गाइगुइ चले देखि नै जनकपुरमा त्यसको विरोध गर्ने जनाएको थियो । र भयो पनि त्यसै विवाहपन्चमीको दिन राष्टपति जनकपुर पुग्दा प्रहरीको कुटाइवाट झण्डै १ सय जना धाइते भएका थिए । जसमा १ दर्जन जती त भारतीय तिर्थालूहरु थिए । राष्टपति भण्डारीको जनकपुर भ्रमणको चार दिन पछि एक्कासी समाचारहरु छायो कि उनी जानकी मन्दिरवाट फर्किए पछि स्थानिय युवा आन्दोलनकारीहरु तथा मोर्चाका नेताहरु उनलाई विद्यवा जस्ता अपमानित हुने खालको शब्दहरु प्रयोग गर्दै जानकी मन्दिरलाई शुद्धिकरण अभियान थालेका थिए । समाचार आए पछि झनै त्यो क्रम चर्केको देखियो । आन्दोलनकारीहरुले आफुहरु उनलाई विद्यवा भन्दै नभनेको र मन्दिरमा कुकुर, जुता सहित सवै छिरेकाले शुद्धीकरण अभियान थालेको जनाएका छन । यो प्रकरणमा सवै भन्दा पहिला मुछिएका थिए जनकपुर आन्दोलनको उठानमा महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका युवा अभियानी सरोज मिश्र । सरोज जनकपुरमा सक्रिय मास नामक आन्दोलनरत युवाहरु सन्जालको संयोजक पनि हुन ।
फेरि चर्कीयो मधेशमा आन्दोलन । गौरमा प्रहरीको गोली वाट एकको मृत्यू । संशोधन विद्येयक मधेशै भरी जलाइयो ।
गएको शुक्रवार विरगंजमा निकालिएको मसाल जुलुस
छठ पछि अली शान्त भएको मधेश आन्दोलन फेरि चर्केको छ । गएको शुक्रवार मधेशी मोर्चाले आन्दोलन पुन सशक्क्त बनाउने उदघोष गरे पछि मधेशै भरी फेरी आन्दोलन चर्किएको छ । गएको शुक्रवार देखि नै मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा प्रर्दशनहरु कडा रुपमा हुन थाले पछि प्रहरी संग पनि दाहोरो झडपको अवस्था सिर्जना भएको छ । हिजो शनिवार र आज आइतावर दुवै दिन विरगंज र रौतहटको गौरमा आन्दोलनकारीहरु र प्रहरीको दाहोरो झडपहरु दिनै भरी चलेका थिए । रौतहटको गौरमा प्रहरीले चलाएको गोली वाट एक जनाको मृत्यू समेत हुन पुगेको छ । प्रहरी प्रशासनहरुले आन्दोलनकारी प्रहरी माथी आक्रमण गर्न थाले पछि बाध्य भएर गोली चलाउनु परेको बताएका छन भने आन्दोलनकारीहरुले शान्तिपुर्ण प्रर्दशनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन । गएको साउन अन्तिम हप्ता देखि मधेशमा सुरु भएको आन्दोलनमा ५५ जनाको मृत्यू भइसकेको आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले जनाएको छ । विभिन्न अन्तराष्टिय मानव अधिकारवादी संघ संस्थाहरुले जारी मधेश आन्दोलनमा प्रहरी प्रशासनले अत्यद्यिक वल प्रयोग गरेको भन्दै नेपाल सरकारको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन ।
आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै शिर्ष नेताहरु मधेशमा बस्ने । वार्ता अब काठमाडौमा नगर्ने महन्थ ठाकुरको भनाइ ।
काठमाडौमा आज आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मोर्चाका नेताहरु
गएको १२६ दिन देखि जारी मधेश आन्दोलन फेरी चर्काउने उदघोष गरेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा आफनो शिर्ष नेताहरु लाई मधेश भरी नै खटाउने तयारी गरेका छन । खास गरी पछिल्लो समयमा अली फितलो हुदै गएको आन्दोलनलाई थप सश्क्क्त बनाउन लागेको भन्दै नया कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको मोर्चाले स्थानिय आन्दोलनकारीहरुमा अन्योल वढन थालेकाले शिर्ष नेताहरुलाई मधेशमै बस्ने रणनिती बनाएका छन । जस अनुसार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पुर्व क्षेत्रको कमाण्ड गर्दै विराटनगर केन्द्र बनाएर आन्दोलनमा खटिने छन भने तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पश्चिममा खटिने छन । यस अघि देखि नै सदभावना अध्यक्ष विरगंजमा बस्दै आइरहेका छन । त्यसैले महतो विरगंज मै बसेर मध्यको आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने छन । त्यसैगरी तमसपाका अध्यक्ष महेन्द्र यादव सर्लाहीमा बस्ने योजना छ । यसरी मोर्चामा आबद्ध शिर्ष नेताहरु आफै मधेशका विभिन्न भागमा बसेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जनाइएको छ । मोर्चामा आबद्ध सवै तहका नेताहरुलाई काठमाडौ छाडेर मधेशमा आ आफना क्षेत्रमा पुगेर आन्दोलनमा सहभागीता तथा त्यहा सक्रियता जनाउन मोर्चाले आन्तरिक रुपमा भनिसकेका छन । खासगरी दुई हप्ता अघि मोर्चाका शिर्ष नेताहरु दिल्ली भ्रमण गए पछि जिल्लाहरुमा रहेका मधेशी सवै केन्द्रिय नेताहरु मधेश छाडेर काठमाडौ आएका थिए । जसका कारण स्थानिय स्तरमा आन्दोलनकारीहरु विचको सम्वन्यमा ठुलो समस्या देखिन थालिएको थियो ।
जनकपुरमा आज राष्टपति
मिथिला क्षेत्रको प्रसिद्ध मेला मानिने विवाहपन्चमीको अवसरमा आज जनकापुर दिन भर तनावग्रस्त भएका छन । विवाहपन्चमीको अवसरमा जनकपुरको प्रसिद्ध जानकी मन्दिरमा राष्टपति विद्यादेवी भण्डारी पुजा गर्न जाने कार्यक्रम तय भए संगै जनकपुरमा त्यसको विरोध भईरहेको थियो । गएको चार महिना देखि आन्दोलनमा रहेको मधेशी शक्तिहरु प्रमुख पार्टीहरु माथी अधिकार नदिएको आरोप लगाउदै आएका छन । नयां संविद्यानको विरोधमा मधेशमा जारी आन्दोलनका कारण आक्रोशित रहेको मधेशको पृष्टभुमिमा आज जनकपुरको प्रसिद्ध मे्ला विवाहपन्चमी रितिपुर्वक सम्पन्न समेत हुन सकेको छैन । इतिहासमा यसरी विवाहपन्चमीको पद्धती नै पुरा नभएको यो पहिलो पटक हो । जारी आन्दोलनका कारण भारतको अयोध्यावाट जयन्ती आउन सकेको थिएन भने । अर्को राष्टपतिको विरोधका कारण विवामहोत्वका कुनै पनि पद्धतीहरु पुर्या रुपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । विवाहपन्चमीमा जनकपुरमा लाग्ने सवै भन्दा ठुलो मेला हो ।
आन्दोलन चर्काउन पश्चिममा मधेशी पार्टीहरुको विशेष भेला हुदै
पुर्वी मधेशको तुलनामा सिथिल देखिएको पश्चिमी मधेशका जिल्लाहरुमा आन्दोलनरत मधेशी पार्टीहरुले विषेश प्रशिक्षण सहित कार्यकर्ता भेलाहरुको आयोजना गर्न लागेका छन । आउदो ४ पुष देखि नवलपरासी वाट सुरु हुने यस्तो भेलाले पश्चिम मधेशका जिल्लाहरु विच आन्दोलनको समन्वय समितीहरु समेत निर्माण गरिने तयारी छ । तमलोपाका महामन्त्री गोविन्द चौधरीका अनुसार ४ देखि ६ पुष सम्म नवलपरासीमा र त्यस पछि रुपन्देही, कपिलवस्तूमा यस्तो प्रशिक्षण गरिने छ । पश्चिमका नवलरपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तू, वाके र बर्दीया तथा कैलाली र कन्चनपुर जिल्लाहरुको आन्दोलन समन्वय समिती बनाउने तयारी मधेशी पार्टीहरुले गरेका छन । दागमा राजमार्ग केन्द्रित योजना बनाउने तयारी छ । दाग देखि कन्चरपुर सम्म थारु आन्दोलनकारी समितीहरुसंग समेत समन्वय गरेर आन्दोलन समितीहरु बनाउन लागीएको बताएइको छ । यस्तो समन्वय समितीमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका सवै पार्टीहरु सहभागी हुने छन ।
at 5:48 AM Posted by Dalan
आइतवार जारी मधेश आन्दोलनको समर्थनमा काठमाडौमा निकालिएको जुलुस
गएको चार महिना यता आन्दोलित रहेको मधेशका आन्दोलनकारीहरु पछिल्लो केहि दिन यता अन्योलमा देखिन थालेका छन । खास गरी एक हप्ता पहिला संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाका शिर्ष नेताहरु दिल्ली भ्रमणमा गए पछि स्थानिय स्तरमा आन्दोलनका अगुवाहरु समेत अन्योलमा देखिन थालेका छन । मोर्चाका शिर्ष नेताहरुले दिल्ली भ्रमण वाट फर्किए लगतै आन्दोलनको कुनै पनि कार्यक्रममा हेरफेर नभएको भन्दै आन्दोलन यथावत रहेको बताए पनि स्थानिय स्तरमा शिर्ष नेताहरु के गर्न लाग्यो भनेर मधेशका चौक चौराहामा चर्चा हुन थालेका छन । खासगरी पछिल्लो समयमा परराष्टमन्त्री कमल थापा र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज विचको सहमती अनुसार ४ बुदे सहमतीय अवधारणा अघि आए पछि मोर्चाका शिर्ष नेताहरु त्यो नमान्ने सहितको आशय सहित दिल्ली पुगेर भरतीय पक्षहरुलाई जारी आन्दोलनको वारेमा बिफ्रिग गरेका थिए । तर उता वाट फर्किए चार दिन भइस्कदा पनि मोर्चाका सवै शिर्ष नेताहरु आन्दोलनको कुनै ठोस केन्द्रिय कार्यक्रम समेत अघि सारेका छैनन । वरु राजमार्ग केन्द्रित राखिएका आमसभाहरु दिल्ली जाने पुर्वसन्धयामा स्थगीत गरेका थिए । उता आन्दोलनको कुनै पनि कार्यक्रममा हेरफेर नभएको दावी गरे पनि विरगंज वाहेकका अन्य नेपालभारत नाकाहरु पछिल्लो समयमा राम्ररी सुचारु हुन थाले पछि स्थानिय स्तरमा आन्दोलनकारीहरु थप अन्योलग्रस्त देखिन्छ ।
जनकपुर क्षेत्रको आन्दोलनलाई नजिकवाट नियालीरहेका स्थानिय युवा अभियानी अनुज मिश्रा भन्छन, मोर्चाका शिर्ष नेताहरु दिल्ली गए पश्चात आन्दो्लनको रौनकतमा व्यापक कमी देखिन थालेका छन भने स्थानिय आन्दोलनकारीहरुमा व्यापक अन्योलता देखिन थालेका छन । आन्दोलन जारी नै छ, अहिलmे पनि विरोधका कुनै कुनै कार्यक्रम हरेक दिन चाही नभएको होईन, मिश्रा भन्छन, तर केन्द्रित स्तरवाट देखिनु पर्ने संयोजनको व्यापक कमी देखिन थालेका छन, त्यसैले कतै न कतै स्थानिय आन्दोलनका अगुवाहरु संशकित देखिन्छन । यस सगै मोर्चाका शिर्ष नेताहरु माथी विभिन्न आशंका सहितको टिकाटिप्पणीहरु समेत भईरहेको मिश्राको भनाई छ ।
मानवअधिकारकर्मीहरु माथी पनि शंका उब्जीएकै हुन - मोहना अन्सारी ।
हिजो विहिवार मात्रै अन्तराष्टिय मानवअधिकार दिवस मनाइएको छ । गएको चार महिना देखि आन्दोलनमा रहेको नेपालको तराई मधेशमा त्यस यता मानव अधिकारको अवस्था झनै नाजुक बन्दै गएको विभिन्न अन्तराष्टिय मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरुले बताउदै आएका छन । यसै सन्दर्भमा हिजो नेपालले पनि मनाएको अन्तराष्टिय मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भमा मधेश आन्दोलनको निरन्तर अनुगमणमा रहेकी राष्टिय मानव अधिकार आयोग कि प्रवक्ता मोहना अन्सारी शुक्रवार दलानसंग कुराकानी गर्दै यस क्षेत्रको अवस्थालाई यसरी व्यख्या गरिन । प्रस्तुत छ उनी संग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश -
राष्टिय मानव अधिकार आयोग कि प्रवक्ता मोहना अन्सारी
तपाई स्वयंम जारी मधेश आन्दोलनको अनुगमनमा हुनुहुन्छ । हामीले हिजो मात्रै अन्तराष्टिय मानवअधिकार दिवस मनाएका छौ । यस सन्दर्भमा भन्नु पर्दा अहिले तराई मधेशको अवस्था के छ ?
- सवै भन्दा पहिला त गएको चार महिना देखिको लागतार बन्दका कारण तराई मधेशका बासिन्दाहरुका दैनिकीमा अनेकन समस्याहरु सिर्जना भएका छन । नागरिकहरुको दैनिकीमा अनेकन अप्ठायाराहरु देखिन थालिएको छ । विद्याँलयहरु पुर्ण रुपमा सुचारु छैन । ज्यालामा काम गर्ने मानिसहरुको दैनिकी झनै अप्ठायारामा पर्दै गईरहेको छ । आन्दोलनको क्रममा मारिएका व्यक्तिहरुको परिवारमा झनै विचल्ली छाएको छ । व्यापारहरु ठप्प छन । त्यसैले सम्रगमा अहिले तराई मधेशको मानव अधिकारको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छन ।
तपाईले गरेको यी कुराकानी त आम मानिसको दैनिकी भयो ? तर गएको चार महिना देखि जारी मधेश आन्दोलन र त्यस संग राज्यले गरीरहेको व्यहवारले कस्तो अवस्था उत्पन्न भएको छ ?
- हो । यो कुरा साह्ै महत्वपुर्ण छ । म स्वयंम जारी आन्दोलनको सुरु देखि नै अनुगमनमा छू । र साच्चिकै भन्ने हो भने आज तराई मधेशमा राज्यको प्रहरी वाहेक अरु कुनै निकाय काम गरीरहेको छैन । अर्थात तराई मधेशमा राज्य विहिनताको अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रहरीहरुको अवस्था पनि अत्यद्यिक चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ । गएको चारमहिना देखि आन्दोलनकारीहरु संग भिडदा भिडदा उनीहरु पनि तनावमा काम गरीरहेको छ । यसले थप समस्याहरु सिर्जना गरीरहेको छ । आन्दोलनकारीहरु तर्फको कुरा गर्नु हुन्छ भन्ने पनि, उनीहरु आन्दोलन भन्दा पनि शक्ति प्रर्दशन गरिरहेको भान हुन्छ । त्यसैले मानव अधिारको उल्घंन दुवै तर्फवाट भईरहेको छ । तर मेरो बुझाईमा स्थिती अहिल पनि धेरै विग्रीसकेको छैन । यसलाई चाडो भन्दा चाडो वार्ता मार्फत हल गर्नु पर्छ ।
दिल्ली संकेत - आन्दोलन रोकिन्न, 'अवरुद्ध नाका' अहिले नै खुल्दैनन ।
आइतवार दिल्ली पुगेका आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका शिर्ष नेताहरु त्याहा भारतीय उच्च अधिकारीहरु संग लामो लामो छलफलहरु गरेका छन ।
चार दिने दिल्ली भ्रमणमा गएको मधेशी मोर्चाका शिर्ष नेताहरु आज अवेर राती काठमाडौ फर्केका छन । गएको आइतवार दिल्ली पुगेका आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका शिर्ष नेताहरु त्याहा भारतीय उच्च अधिकारीहरु संग लामो लामो छलफलहरु गरेका छन । भारतीय विदेशमन्त्री संग तीन घण्टा लामो डिनर कुराकानी गरेका मोर्चाका शिर्ष नेताहरु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमा सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभेल र भारतीय विदेश सचिव जयशंकर संग १ घण्टा लामो कुराकानी गरेका छन । त्यसको संग हाल सतारुढ भारतीय जनता पार्टीको नेपाल हेर्ने जिम्म पाएका राम माधव संग लन्च मिटिंग संैगै पुर्वराजदुतहरु संगको छलफल देखि त्याहाका विपक्षी नेताहरु सम्म मोर्चाका शिर्ष नेताहरुको कुराकानी भयो । आफनो चार दिने दिल्ली भ्रमण वाट काठमाडौ फर्केका मोर्चाका शिर्ष स्रोतका अनुसार परराष्टमन्त्री वाट अघि सारिएको तीन बुदे प्रस्ताव बमोजिम वार्ता अगाडी वढने छैन । र हाल चर्चामा आएको अवरुद्ध नाका पनि खुल्ने छ्रैन । भारतीय विदेशमन्त्री संगको अनौपचारिक डिलको आधारमा भनिएको परराष्टमन्त्री थापाको उक्त प्रस्ताव वारे मोर्चाको दिल्ली भ्रमण पश्चात त्याहा पनि कुरा परिर्वतन भएको दिल्ली कुटनितीक उच्च स्रोतको दावी छ ।
सम्भवतह मोर्चाका शिर्ष नेताहरु भोली वा पर्सी औपचारिक रुपमै संघियताको सिमांकनको छिनोफानो नहुन्जेल आन्दोलनमा कुनै परिर्वतन नआउने र सहमतीको अन्य कुनै प्याकेजमा सहमती समेत नजनाउने धारणा सार्वजनिक गर्दै छन । खासगरी परराष्टमन्त्री थापा दिल्ली वाट गएको विहिवार फर्के देखि नै काठमाडौले भनिदै आएको अघोषीत नाका अव खुल्ने सहितको समाचारहरु आएका थिए । त्यसै लगतै आन्दोलनरत मोर्चाका शिर्ष नेताहरु दिल्ली गए पछि यसले थप व्यापकता पाएका थिए । दिल्ली भ्रमणको क्रममा मोर्चाका नेताहरुलाई सवै पक्षहरु वाट नाका अवरुद्ध खुल्ला गर्ने सल्लाह आएको भन्दै समाचारहरु आएका थिए । तर मोर्चा दिल्ली वाट काठमाडौ फर्कने सुरसारमा गरीरहदा दिल्ली कुटनितीक स्रोतले बताएका अनुसार भारतीय पक्ष अव यसवारेमा तटस्थ बस्ने लाईनमा जाने छन । मधेशी मोर्चाले परराष्टमन्त्री थापाले अघि सारेको खाका अनुसार आफुहरु सहमत हुन नसक्ने अडान दिल्लीमा दोह्याए पछि स्थितीमा आकाश जमीनको परिर्वतन आएको छ । एक मोर्चाका शिर्ष नेता भन्छन, दिल्ली पहिला जस्तो अब रहेन, संघियता सहितको प्याकेजमा सहमती नहुन्जेल जारी आन्दोलन चलीरहन्छ, ढुक्क होउ ।
दिल्लीमा मोर्चाका शिर्ष नेताहरुको राजनितीक भेटघाट जारी
गएको अइतवार वेलुकि मोर्चाका शिर्ष नेताहरु र भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज विचको भेटवार्ता
गएको आइतवार देखि दिल्ली भ्रमणमा रहेका आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका शिर्ष नेताहरु विभिन्न तहका राजनितीक भेटघाटमा मंगलवार वेलुकि सम्म व्यवस्त छन । जारी मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न परराष्टमन्त्री कमल थापा र भारतीय विदेशमन्त्री विच एउटा सहमती भए पश्चात मोर्चाका शिर्ष नेताहरु दिल्ली पुगेका हुन । गएको शुक्रवार विहानै मोर्चाका एक घटक तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई परराष्टमन्त्री थापाले उक्त सहमतीको दस्तावेज उपल्बध गराए पछि मोर्चाका शिर्ष नेताहरु सरकारी पक्ष संगको वार्तामा सहभागी समेत नभई दिल्ली उडेका थिए ।
‘दिल्ली साक्षी’ मा मधेश सहमतीको खोजी । चार दिने दिल्ली भ्रमणमा मधेशी मोर्चाका नेतृत्वहरु आइतवार जाने ।
चार दिने दिल्ली भ्रमणमा मधेशी मोर्चाका नेतृत्वहरु आइतवार जाने ।
‘दिल्ली साक्षी’ बनाएर प्रमुख दलहरु र गएको १ सय दिन भन्दा वढी देखि आन्दोलनमा रहेको मधेश विच सहमतीको खाजी तीव्र रुपमा भईरहेको छ । हिजो मात्रै नेपालका परराष्टमन्त्री कमल थापा दिल्ली भ्रमण वाट फर्किए पछि आज प्रमुख तीन दलले जारी आन्दोलनको लागी साझा अवधारणा तया गरे पछि पछिल्लो अवस्थाको विकासक्रम भएको कतिपय स्रोतहरुले जनाएका छन । प्रमुख दलहरुको अवधारणा प्रति पुर्ण सन्तुष्ट नरहेको मधेशी मोर्चाका शिर्ष नेताहरु चार दिने दिल्ली भ्रमणमा आईतवार जादै छन । दिल्ली स्रोतका अनुसार ६ देखि ९ डिसेम्बर सम्म आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका शिर्ष नेताहरु कार्यतालिका तय भएको छ । जस अनुसार आउदो आइतवार देखि वुधवार सम्म मोर्चाका शिर्ष नेताहरु दिल्ली भ्रमणमा रहने छ । दिल्ली स्रोतका अनुसार दिल्ली भ्रमणको क्रममा मोर्चाका शिर्ष नेताहरु भारतीय प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार सहित केहि भारतीय वुद्धजिवीहरु संग भेटघाट गर्ने छन । काठमाडौमा शुक्रवार वेलुकि मात्रै मोर्चाका शिर्ष नेताहरु र भारतीय राजदुत विच छलफल भएको छ ।
‘दिल्ली साक्षी’ को खोजी
न हामी थाकेका छौ, न त हामी हार्ने छौ - मोर्चाका अगुवा नेताहरु
विराटनगर, भैरहवा र नेपालगंजमा सम्प्रदायीकता फैलाउन सताधारीहरुले १० करोड रुपैया पठाएर योजना बनाएको तमलोपा नेता त्रिपाठीको दाबी
गएको १ सय दिन भन्दा वढी देखि जारी मधेश आन्दोलनका दुई जना अगुवा नेताहरु मधेशको मुद्धा सम्बोधन नहुन्जेल नाका अवरुद्ध र आन्दोलन फिर्ता नहुने बताएका छन । काठमाडौमा जारी मधेश तथा थरुहट आन्दोलन प्रति नागरिक एक्यवद्धता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मधेशी मोर्चाका दुई घटक तमलोपाका सहअध्यक्ष हृदेश त्रिपाठी र सदभावना सहअध्यक्षक लक्ष्मण लाल कर्ण जारी आन्दोलन अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन भएको भन्दै मधेशी, थारुको मुद्धा सम्बोधन विना नयां संविद्यान लागु हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । तमलोपा नेता त्रिपाठीले भने, प्रमुख दलहरु संघियतालाई समाप्त पार्ने गम्भिर खेल रच्ने आन्तरिक तयारीमा जुटेको सुचना हामी संग पनि छ, तर त्यो तीनीहरुको दिवास्वप्न वाहेक अरु केहि हुदैन । त्रिपाठीले भने, यदी मधेशीको माग संघियता लागु भएन भने संघियता संगै आएका कुनै पनि मुद्धालाई हामीले लागु हुन दिने छैनौ । केहि खास व्यक्तिहरुको इच्छाले वनाइएको हालको संघियताको खाका कुन आधार वनाइएको भनेर प्रशन समेत त्रिपाठीले गरे । उनले भने, केहि सताधारीको अनुमानमा हामी थाकेर आन्द्योलनमा पछि हटछौ भन्ने छ, तर म यही वाट सवैलाई भन्ने चाहन्छौ, हामी मधेशी नत थाकेका छौ नत हार्ने छौ ।
भोली - कि मिल्छन, कि भिडछन !
अनौपचारिक रुपमा ठाकुरले प्रमुख दलहरु सामु मोर्चाको सवै वटम लाइनहरु वताइ सकेका छन । हेर्न वाकी छ, भोली प्रमुख दलहरु मिल्ने आधार लिएर आउछन कि भिडने वातावरणको सिर्जना गर्ने छन ।
भोली वुधवार प्रमुख तीन दल र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा विच वार्ता हुदैछन । हिजो सोमवार भएको वार्तालाई सौभाद्रपुर्ण बताएका नेताहरुले वुधवारको वार्ता ठोस निष्कर्ष उन्मुख हुने बताएका थिए । मोर्चाले आफुहरुले अघि सारेको ११ बुदे मागको वटम लाईनमा सरकारी पक्षको ठोस जवाफ नआए सम्म छलफल वा वार्ताको कुनै तुक नभएको बताए पछि प्रमुख दलहरु वुधवार ठोस जवाफ निष्कर्ष सहित आउने बताएका छन । तर सोमवार दिउसो प्रमुख दलहरुले वार्ता भयो एका तर्फ वेलुकी अवेर साझ नेपालगंजमा सिमा नामामा धर्नामा बसेका मधेशी आन्दोलनकारीहरु माथी प्रहरीको क्रुरर अपरेशन भयो । अवेर राती सरकारी मिलोमतोमा बिजुली समेत काटेर आन्दोलनकारीको टेन्ट समेत कब्जामा लिएर प्रहरी आन्दोलनकारीहरु संग झण्डै तीन घण्टा दाहोरो झगडा गरे । मधेशी मोर्चा सोमवार रातीको नेपालगंज घटनाले फेरी एकचोटी नराम्ररी झस्कीएका छन । मोर्चाको वार्तामा सहभागी कतिपय नेताहरु भन्छन, जती जती वेला काठमाडौमा वार्ताको अली साकारात्मक संकेत देखा पर्यो कि प्रहरीले केहि न केहि उपद्रो देखाइ हाल्छन, आखिर यसले गर्न खोजेको के हो ?